China Safe, ọkụ na-eguzogide nchara, akara mkpisiaka akara mkpọchi, ụdị nile nke mma ụlọ ọrụ na-emepụta | Boda
Site na mmepe nke sayensi na teknụzụ, nchekwa nke oge a amalitela site na ọrụ mgbochi ohi kachasị dị mfe n'ụdị dị iche iche, dịka mgbochi ohi, mgbochi ọkụ, mgbochi ohi, ọkụ ọkụ, mgbochi magnetik, ezinụlọ, azụmahịa, ụlọ nkwari akụ , egbe, akwụkwọ, data, wdg.
N'ihi ọrụ ya pụrụ iche na mgbochi ohi, nlebara anya pụrụ iche kwesịrị ịhọrọ nhọrọ nchekwa. Nhọrọ nke nchekwa nwere ike isi na-atụle akụkụ ndị a:
1.Steel efere ihe nhọrọ: ịmata ọdịiche si ọkpụrụkpụ, ihe onwunwe na mbido nke ígwè efere, nke metụtara na-amị ikike nke mma mgbe eji pụrụ iche ngwaọrụ dị ka electric akuakuzinwo na ọnwụ.
2.N'ịkpụzi ọkụ na ịgbado ọkụ: lelee ma etinyere otu ụlọ ọrụ n'otu oge, lelee ma ọdịiche dị n'etiti ọnụ ụzọ kabinet na ọnụ ụzọ, yana ma mgbanwe ahụ ọ na-agbanwe. Ọ bụrụ na ọdịiche ahụ buru oke ibu, ọrụ mgbochi prying ga-ada mbà. Maka nchekwa nchekwa ọkụ, anaghị anabata nnukwu oghere.
Usoro ọdịnala: Nke a bụ isi nke nchekwa. N'ihi na ọ dị na igbe ahụ, onye ọrụ enweghị ike ịhụ ya, mana ọ bụ igodo iji gbochie oghere teknụzụ. Ndị ọrụ nwere ike ịrịọ onye ahịa ahụ ka o mepee mkpuchi azụ n'azụ oghere ọnụ ụzọ iji chọpụta ma usoro ọdịnala dị n'ime ya ziri ezi yana ma nnyefe ahụ na-agbanwe. Na mgbakwunye, anyị kwesịrị ịlele usoro nke mkpọchi mkpọchi. Akara nke mkpọchi mkpọchi kwesịrị thickened. Ugbu a usoro mkpọchi mkpọchi ama ama nwere ezigbo mgbochi mmeghe.
4. Mkpọchi: ọ bụrụ na usoro ọdịnala bụ ihu, mgbe ahụ mkpọchi bụ isi ihe kachasị mkpa. Ebibi mkpọchi ma ọ bụ iitatingomi igodo bụ otu ihe na-ebibi obi nke usoro mgbochi ohi. Mgbachi gbachiri nwere ike n'ụzọ dị irè gbochie mmebi na isi iyingomi.
5.Onye na-enyere aka: nhazi nke ihe ndi ozo kwesiri ime ka ntukwasi obi nke oru ha iji nagide ebe obibi na-agbanwe agbanwe.
6. Oti mkpu: arụ ọrụ mkpuchi na-akpaghị aka, na n'ọnọdụ ụfọdụ enwere ike ịnye mkpu na-akpaghị aka (dịka ịgagharị, ịkụ aka ma ọ bụ koodu atọ na-ezighi ezi). N’ezie, ọnọdụ ọnọdụ mmeghekwu bara ụba, nke ka mma. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ nchekwa adịghị arụ ọrụ mkpu na-akpaghị aka, ma ọ bụ ọnọdụ ole na ole na-arụ ọrụ na-akpaghị aka. Ikwesiri ịjụ ase mgbe ị na-azụ ihe.
7.Anti corrosion ọgwụgwọ: ọ bụrụ na usoro a adịghị edozi nke ọma, ọ ga-emetụta ọdịdị nke igbe ahụ, na n'ọnọdụ ndị dị oke njọ, ọ ga-emebi ọrụ ahụ. N'ime na mpụga nke mgbochi-ezu ohi mma kwesịrị na-ese, ịgba plastik na ndị ọzọ n'elu mgbochi corrosion ọgwụgwọ. Mechanical mma.
8.Adịdị: nnukwu na monotonous abụghịzi onye ahịa nghọta nke nchekwa. Ndị mmadụ na-ewere ya ka ihe ịchọ mma ụlọ. Nke mbụ, leruo anya ma elu ahụ dị larịị ma ma agba ahụ ọ dị. Nke abuo, hu ma agba na udi nke ha kacha amasị ha, ma gbakota ya na ebe ulo oru ahu n’eji zuta.
9.Size: tụọ oke nchekwa dị ka mkpa gị si dị. Ọ bụrụ na etinye ya n'akụkụ nkuku mgbidi ahụ, ọ dịghị mkpa ịtụle nha oke oke. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa itinye ya na ebe zoro ezo, dị ka kabinet, oke nchekwa ahụ kachasị 50 cm na ibu dị n'ime 30kg. Ekwesiri ighota na otutu nchekwa ndi nwere ihe kariri 50 cm bu ndi nwere nku ala ma enwere ike imeghari ha ebe obula. Ugbu a enwere ọtụtụ nha na nkọwapụta nke nchekwa. Ohaneze, oke kachasị nwere ike karịa 100cm. Enwere ike ịhazi ya. Ọ na-ewe ụbọchị 15 iji hazie.
10.Battery: kpọmkwem maka kọmputa paswọọdụ dị mma. Na mgbakwunye na batrị arụnyere, elektrọnik paswọọdụ dị mma nwere igbe batrị dịpụrụ adịpụ. Mgbe ịzụrụ, ịkwesịrị ị needa ntị na ọ zuru ezu. OSEdị akara nke BOSENDA nwekwara ngosipụta ike na ngalaba ahụ, nke nwere ike inye gị ezigbo nkasi obi na arụ ọrụ n'ezie.
BOSENDA na-eweta nchekwa zuru oke nke igbe nchekwa / nchekwa, igbe nchekwa nchekwa ọkụ / nchekwa nwere ọrụ dị iche iche na nkọwa ndị akọwapụtara n'elu, enwere ike ịhazi ibu dị ka ihe ndị ahịa chọrọ, mkpọchi mkpịsị ugodi, mkpọchi mkpisiaka, mkpọchi okwuntughe dika dị iche iche mkpa, ihe si nkịtị ígwè efere ka ibu ike ígwè efere, ahaziri dị ka dị iche iche mkpa. Mmepụta kwa ọnwa nke iri puku kwuru iri, nnyefe ọsọ ọsọ, iji zere oge ndị ahịa na-echere. Mmepụta na arụmọrụ dị elu, njikwa ike nke njikọ niile.
Nke gara aga: Mụbaa mbọ na kposara, plastic mgbasa ịghasa, mmụba scew ntu mgbasa ịghasa, cacable mkpachị
Osote: Angle grinder, mmetụta dakpuo, hama, li-ion malite ịgba, ike ngwaọrụ
N'akuku grinder, mmetụta malite ịgba, hama, li-ion dri ...